काठमाडौं : सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले सञ्चालन गरेको ‘मेरो सेयर’ वेबसाइट र एप शुक्रबार दिनभर ठप्प भएको छ । मेरो सेयर नचलेपछि आम लगानीकर्ता हैरानीमा परेका छन् । सेयर बेचेकाहरुले सेयर ट्रान्सफर अर्थात इडीआइएस गर्न पाएका छैनन् । सेयर राफसाफमा टी प्लस टु प्रणाली लागू भएपछि बिक्री गरेको सेयर भोलीपल्टै इडीआइएस गर्नुपर्छ । नत्र क्लोज आउट हुने र २०% जरिवना तिर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
तर दिनभर मेरो सेयर नचलेपछि लगानीकर्ता तनावमा परेका छन् । यस्तै, सीडीएसले आइपीओ रिजल्ट अनलाइन न्यूज पोर्टलहरुबाट हेर्न बन्देज लगाउँदा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले दिनभर महिला लघुवित्तको आइपीओ रिजल्ट हेर्नबाट समेत बञ्चित भएका छन् । किन भने बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङ, महिला लघुवित्त तथा मेरो सेयर यी ३ वटै संस्थाको वेबसाइट दिनरभर ठप्प छन् ।
उता, लगानीकर्ताहरुले भने आफ्नो आक्रोश सामाजिक सञ्जालमार्फत पोखिरहेका छन् । बिना योजना र उपयुक्त तयारीबिनै अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई आइपीओ रिजल्ट प्रकाशन गर्न रोक्दा यस्तो अवस्था आइलागेको हो । सीडीएसले सञ्चार माध्यममा रिजल्ट सार्वजनिक गर्न रोक्यो तर यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर कुनै तयारी गर्न नसकेको देखिन्छ ।
यसबाट मारमा भने फेरि पनि सर्वसाधारण लगानीकर्ता नै परेका छन् । अझ, बिक्री प्रबन्धक र आइपीओ खुला गर्ने कम्पनीको वेबसाइट त झन् खुल्नै सकेको छैन । तथ्यांक दुरुपयोग भएको आरोप लगाउँदै आइपीओ रिजल्ट हेर्न रोकिएको छ । तर कहाँ, कसले र कसरी तथ्यांक दुरुपयोग गर्यो भन्ने कुनै प्रमाण छैन ।
सूचना प्रविधिको अहिलेको जमानामा हचुवा र अनुमानका भरमा तथ्यांक दुरुपयोग भयो भन्दै बिनातयारी आइपीओ रिजल्ट सार्वजनिक गर्नबाट सञ्चार माध्यमलाई बञ्चित गर्नुको कुनै औचित्य देखिंदैन । यसरी हचुवाको भरमा निर्णय गर्नुभन्दा तथ्यांक दुरुपयोग भएको छ भने कसरी भएको छ ? कहाँबाट भएको छ अनि कसरी रोक्न सकिन्छ भन्नेतर्फ कदम चालेको भए बुद्धिमानी देखिने थियो ।
दुरुपयोग हुनबाट रोक्न सुरक्षाका विधि अवलम्बन गर्न सकिन्थ्यो । तर त्यसतर्फ नगई हचुवा र अनुमानका भरमा रिजल्ट सार्वजनिक गर्नबाटै रोक्दा बिहान ८ बजे बाँडफाँट भएको आइपीओ रिजल्ट रातिसम्म पनि हेर्नबाट सर्वसाधारण आवेदक वञ्चित भएका छन् । आवेदकहरुमा दिनभर छटपटी देखिएको छ ।
बरु, दुरुपयोग हुन नदिने उपाय अवलम्बन गर्ने अनि दुरुपयोग भएमा दण्ड जरिवनाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । तर यहाँ त हचुवा र अनुमानमात्र गरेको देखिन्छ । यदि सीडीएससँग दण्ड जरिवना गर्न सक्ने प्रणाली छैन भने तथ्यांक अरु निकायले पनि त दुरुपयोग गर्न सक्लान । उसकै आशंकालाई आधार मान्ने हो भने बिक्री प्रबन्धक, सम्बद्ध कम्पनीले पनि दुरुपयोग नगर्ने कुनै ग्यारेन्टी छ र ?
यसको जवाफ पनि सीडीएस र धितोपत्र बोर्डले दिन सक्नुपर्छ । सञ्चार माध्यमतिर मात्रै आँखा तेर्साउनुभन्दा कतैबाट वा कुनै पनि निकायबाट समेत दुरुपयोग हुनबाट कसरी रोक्ने भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हो । अनि, यसका लागि सुरक्षाका विधि र प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने हो । तर यहाँ त रिजल्ट सार्वजनिक गर्नबाटै बञ्चित गरियो । आखिर, यसबाट घाटा सञ्चार माध्यमलाई होइन, सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई भयो ।
सर्वसाधारणले आइपीओ रिजल्ट हेर्न पाएका छैनन् । उनीहरुको अधिकार ठाडै उल्लंघन भएको छ । आधिकारिक साइटहरु कुनै चल्दैनन् । यस्तो अवस्थामा सीडीएसले औपचारिक सूचना वा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । अझ, नियामक धितोपत्र बोर्ड त रमिते जस्तो मात्रै बनेको छ । नियामक निकाय भएकाले धितोपत्र बोर्ड आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन पाउँदैन् ।
नेप्से, सीडीएस, मर्चेन्ट बैंकर वा ब्रोकरकै तर्फबाट भएका गल्तीकमजोरीको समेत अन्तिम जवाफदेहिता धितोपत्र बोर्डमा हुन्छ । किन भने ऊ नियामक निकाय हो । पुँजी बजारको बजारको सबल र दुर्बल दुवै पक्षको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताबाट बोर्ड उन्मुक्त हुन सक्दैन । अनि, समस्या समाधानका लागि उसले तत्काल कदम चाल्न सक्नुपर्छ । समाधान सहितको निर्देशन माताहतका संस्थालाई दिनुपर्छ ।
तर यो प्रकरणमा धितोपत्र बोर्ड नेतृत्व चुकेको छ । किन भने रिजल्ट सार्वजनिक नगर्न धितोपत्र बोर्डले पनि सीडीएसलाई निर्देशन दिएको छ । यसरी निर्देशन दिंदा लगानीकर्ताले सहज तरिकाले समयमै रिजल्ट हर्न सक्छन् त भन्ने जवाफ पनि बोर्डले खोज्नैपर्ने हुन्छ ।
यसमा लगानीकर्ताका संगठनहरु पनि चुकेको देखिन्छ । दिनभर जिम्मेवार निकायका साइटहरु खुलेका छैनन् । लगानीकर्ताले बेचेको सेयर इडीआइएस गर्न पाएका छैनन् । लाखौं आवेदकले आइपीओ रिजल्ट हेर्न पाएका छैनन् । तर उनीहरुको औपचारिक विज्ञप्ति आउन सकेको छैन । सरोकारवाला निकयाहरु ‘तैं चुप मैं चुप’ को अवस्थामा रहँदा मारमा भने सोझासाझा लगानीकर्ता नै परेका छन् ।
यस्तो छ मेरो सेयर साइटको अवस्था